UMbongeni Ngema obishini lombango wepulazi lomphakathi - Bayede News
UMbongeni Ngema obishini lombango wepulazi lomphakathi
Uphika ubholokoqa obayizolo uthi akazani nokuhlanganiswa nepulazi iToggkry kepha amalungu omphakathi ayaqinisekisa ubukhona nathi kungenxa yalokhu abakubiza ngomkhonyovu
SIYAQHUBEKA isililo ngodaba lomhlaba KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela uphenyo olunzulu olwenziwa ngoZul’azayithole ngalolu daba. Phakathi kwezinto ezivelayo wumkhonyovu nokwenzelela okwenziwa yizisebenzi zikaHulumeni, ngumkhonyovu owenziwa ngamalungu athile omphakathi afike azibeke ukuthi yiwo amele umphakathi thizeni ofaka isicelo somhlaba kusetshenziswa uhlelo lwamaTrust. Kepha okushaqisayo yilapho umkhonyovu usuthinta nezinhlaka zoBukhosi nazo okuvela ukuthi kazizibekile phansi.
Omunye umphakathi okhala eseNdlovukazi uNandi ngalokhu okubiza ngokwenzelela kanye nomkhonyovu othinta ipulazi “lawo” yilowo waseMelmoth endaweni yaseNhlanhleni ngaphansi kweNkosi uSipho Mpungose. Igama lepulazi okukhalwa ngalo yiToggkry (KwaBhukuda) elingunombolo 436 okuvela ukuthi uMnyango usuliqashisele uMnu uMbongeni Ngema wodumo lwemindlalo yeshashalazi.
Lezi zinsolo zivezwe ngamalungu omphakathi athi kuwashaqisile ukuvela kokuthi uMnyango wakwaLand Redistribution and Land Reform usuqashise uNgema ekubeni bona bafaka isicelo sokubuyiselwa le ndawo ngonyaka we-1998. Okhulumela lo mphakathi uMnu uMichael Khekhe Shandu uthi babikelwe ngoZibandlela nyakenye ukuthi isicelo sabo sokubuyiselwa umhlaba siphumelele njengoba nomlungu obengumnikazi walo, uMnu uCalvery ebatshele ngawo uZibandlela ukuthi useyadeda epulazini ngoba uHulumeni usebathengele.
“Nangempela umlungu uphume ngawo uZibandlela epulazini lethu. Kodwa sidumele ngomhla zizine kuMasingana nonyaka ngesikhathi sithi siyokwenza amasiko ethu emalibeni sesifica izikhulu zoMnyango Wezemihlaba ezathi zisuka emaHhovisi aseVryheid zihlangane noMnu uMbongeni Ngema ngaphakathi epulazini lethu. Omunye walezi zikhulu zoMnyango wazichaza ngokuthi unguNkk uNkosi,” kusho uShandu.
Uqhuba uthi: “Kuthe uma sibuza ukuthi kwenziwani nokuthi nathi singaba yini yingxenye yomhlangano zathi cha zizobuye zihlangane nathi zagcina ngokuthatha izinombolo zethu zikamakhalekhukhwini.”
UShandu uthi badumala uma sebetshelwa ngabasebenzi bangaphakathi epulazini ukuthi empeleni epulazini sekungene uNgema ongesiye ngisho owasendaweni. “Ngenxa yokuthi nalezi zikhulu zoMnyango ezathatha izinombolo zethu zazingasabuyeli kithi njengokwethembisa kwazo sanquma ukuba siyonikela emaHhovisi aseVryheid siyofuna izincazelo nokuthi basihlelele umhlangano noNgema. Esikhundleni sokuba basisize kwavele kwathiwa asixhumane noMnu uTuwani kulenombolo ethi 0828276212,” kuqhuba uShandu.
UShandu uqhuba uthi kuthe sebebonana noMnu uTuwani noMnu uXaba baphika ukuthi bayazana nodaba lokunikezwa kukaMnu uNgema ipulazi labo. “Okunye okusiphatha kabuhlungu ukuthi uNgema wenqaba nokuba sisondele emalibeni emindeni yethu ukuze sikwazi ukugcina amasiko ethu. Ngikhuluma nje useqashe nonogada abaqaphe abazongena ngaphakathi,” kuqhuba uShandu.
Ozul’azayithole babe sebethungatha uTuwani nowale waphetha ukuphawula ngalolu daba emi kwelokuthi yena “akahlangane nodaba lwaseToggkry ngoba usebenza eVryheid”. Babe sebedlulela kuye uNgema naye ophike walala ngomhlane ethi udaba lolu akalwazi njengoba elaboHlanga libika. “Ngokwazi kwami uHulumeni ipulazi iToggkry ulithengele umphakathi waseMthonjaneni. Ngakho ngelo mphakathi mina angihlangene nakancane nalo,” kusho uNgema. Uma ebuzwa ukuthi pho uyithathaphi imininingwane yokuthi uHulumeni uluthengele umphakathi ekubeni engesiye owendawo futhi engahlangene nalo ushaye ngamafushane.
“Ngicela ubuze aboMnyango Wezomhlaba yibona abazokuchazela kahle. Mina angihlangene nakancane nalelo pulazi.” Kwale ngisho kuthulwa ubufakazi bomlimo uMnu uNico Harries oqinisekisayo ukuthi ngempela uyamazi uNgema ukuthi usengumakhelwane wakhe, uphinde wakuchitha njengamampunge akushoyo. “Ngokwazi kwami lowo mlungu ipulazi lakhe liqhelelene kakhulu kabi neleToggkry,” kuphetha uNgema.
Obambe njengeKwaZulu-Natal Land Claims Commissioner, uNkkz Nokuthokoza Ndlela-Zulu empendulweni ebisohlwini lwemibuzo athunyelelwe yona ngesonto eledlule uthe bona abanalwazi ngepulazi okuthiwa lithengwe nguNgema. “Uma ukhuluma ngamaLabour Tenants aseToggkry ungathola ngalolo lwazi KwaLand Redistribution and Land Reform (LRLR). Ngokwazi kwethu akukho mapulazi esethengiwe eMelmoth.Wonke amapulazi aseMelmoth kusalindelwe isinqumo senkantolo iLand Claims Court ngomhlazili 7 kuNcwaba kuya ku31 kuNcwaba 2017,” kusho uNkkz Ndlela-Zulu.
Imeneja yakwa LRLR, uMnu uSam Mahlaba yena usho okwehlukile kuNgema njengoba ethe uyakuqinisekisa ukuthi ipulazi iToggkry “uHulumeni uliqashisele uNgema”. Nokho uthe okunye okuyimibuzo asidlulele phambili kubaphathi bakhe. “Ipulazi iToggkry selingaphansi kukaHulumeni. UHulumeni ulithenge ngaphansi kohlelo olubizwa ngePro-Active Land Acquisition. Umphathi wami ongumqondisi wakwaProperty Management, uNkk uZama Molife nabanye ozakwabo emasontweni amabili edlule babenomhlangano nomphakathi waseToggkry beyowuchazela ngokuzoqhubeka ngepulazi. Umphakathi wakwemukela konke owawuchazelwa khona,” kuqhuba uMahlaba. “Ngesonto elizayo siphindela khona emphakathini waseMthonjaneni ukuyoqedela umhlangano wethu nabo.”
UMahlaba ugxeke umphakathi waseMthonjaneni ngokuthi udaba lwepulazi iToggkry usulwenze ihaba. “Banjalo-ke abantu ufike ukhulume kahle nabo nizwane ngakusasa ebese bekujikela. Ngokwazi kwami konke kusahamba kahle ngepulazi iToggkry. Futhi ngiyawuqinisekisa umphakathi ukuthi ngeke siwulahlele ngaphandle nawo uzohlomula ngalo. Ngisho nabantu abasebenza kulo bazohlomula ngengxenye yezinkomo ezashiywa ngumlungu epulazini ezili-150,” kuqhuba uMahlaba.
Ebuzwa ukuthi yimalini aqashiselwe ngayo uNgema, uMahlaba uthe nalokho kuyoqhamuka eziphathimandleni. “UMqondisi wethu wakwaProperty Management, uNkkz Zama Molife uma eseqedile emhlanganweni uzokuthinta ukuze akunikeze yonke imininingwane oyidingayo,” kuphetha uMahlaba.
Luphenduke inkombankombane olwempesheni
UMnu uSibusiso Mbatha ongomunye wababefake isicelo sokubuyiselwa leli pulazi naye uhambe emagameni kaShandu ethi bona bengumphakathi abakaze bachazelwa muntu ngokuqashiselwa kukaNgema ipulazi labo.
“Pho uma kunjalo thina mphakathi sizohlomula kanjani ngemali aqashiselwe ngayo. Kukhona okushaya amanzi lapha, phela akukwazi ukuthi thina mphakathi sifike sifake siscelo sokubuyiselwa umhlaba ngowe-1998 ebese uHulumeni ejika ezithengela yena ipulazi lethu,” kusho uMbatha.
Uqhube wathi: “Sicela basikhombise amaminithi omhlangano azoqinisekisa ukuthi ngempela ukhona umhlangano abake bawubamba nathi bezosichazela ngoNgema. Umbuzo umile ekutheni thina mphakathi sizohlomula kanjani ngalo uma kungukuthi futhi imali yokuliqasha isibuyela kuhulumeni.”
Luya luvela uhlelo olunzulu lokukhwabanisa ngamapulazi
Ekulandeleni lolu daba nezinye ezizoshicilelwa maduze nje elaboHlanga lithole ukuthi kukhona uhlelo olunzulu lokukhwabanisa amapulazi kwaZulu-Natal. Ekhaleni lalo mkhuba izisebenzi zoMnyango Wokwabiwa Nokubuyiswa Komhlaba (Land Redistribution and Land Reform [LRLR]). Ingede yelaboHlanga eseMnyangweni ogama layo esiligodlile ikuqinisekisile okwenziwa ngozkwabo emphakathini eyahlukene KwaZulu-Natal. Ithe iqhinga elisetshenziswayo wukufaka izindawo lezi ngaphansi kohlelo lomhlaba kaHulumeni (state land) . Indawo ingahlonzwa kanjalo kusuke sekuqala ukukhuluma izisebenzi sezizisikela ivenge. Ezeka lokho okwenzeka eToggkry uthi:
“Ngokwazi kwami zazizine izicelo zokufuna ukubuyiselwa umhlaba ezazifakwe ngumphakathi waseMthonjaneni. Kulabo abafaka izicelo zokubuyiselwa umhlaba kubalwa, uMnu uBhekithemba Sibiya egameni labantu ababehlala epulazini iSweet Home. Esinye isicelo ngesafakwa nguMnu uFanyana Mthimkhulu egameni lomphakathi owawusebenza epulazini iToggkry. Kwathi esinye safakwa nguMnu uWelcome Mthimkhulu egameni lomphakathi owawuhlala epulazini iBolsehoek neBoekeneker. Esinye safakwa yiNkosi uSipho Mpungose egameni lesizwe sakhe yena obefuna iMfule Mission kanye namapulazi aseduze kweMfule Mission.” kusho umthombo.
Uqhuba uthi: “Izikhulu zoMnyango wakwaLRLR zanquma ukuzihlanganisa zozine lezi zicelo ngenhloso yokuzenza isicelo esisodwa. Inhloso yalokhu kwakungamaqhinga okukhiphela ngaphandle amapulazi ayefunwa yizo izikhulu ukuze kube lula kuzo ukuwathenga ngenhloso yokuwafaka ngaphansi komhlaba State land. Nakwezinye izindawo kwenziwe kanjalo,” Isithombe esivelile ngesithi ipulazi uma selingaphansi kweStateland kubalula ezikhulwini zoMnyango ukuzenzela umathanda ngalo.
nguMandla Zulu Feb 24, 2017